I-Wholesale CBG Amafutha Ngu-Trytranquil.net | 2022 Izintengo Ezinhle Kakhulu
Iyini i-CBG Oil Wholesale?
I-CBG Wholesale isebenzisa izinqubo zesayensi ezithuthuke kakhulu ukuvuna i-CBG. I-CBG, eyaziwa nangokuthi i-cannabigerol, i-cannabinoid eyaziwa kancane. I-CBG ikhishwa ezitshalweni ze-cannabis ngeziqu zayo, iziqu, nembewu. I-CBG iyi-molecule ye-acidic precursor esetshenziswa isitshalo ukudiliza i-THC kanye I-CBD. Iyisandulela, okusho ukuthi ayivamile futhi idinga ulwazi nokuqonda okwengeziwe mayelana nekhemistri ngaphambi kokuvuna.
Kungani i-CBG Oil Wholesale
Sinokuxhumana okuqondile nabalimi nososayensi baseColorado, ukuze sikwazi ukuhlinzeka ngekhwalithi ephezulu Uwoyela we-Bulk & Wholesale CBG ngamanani akhokhelekayo. Ukukhishwa okusemthethweni kwe-cannabinoid ezitshalweni ze-hemp kungenzeka. I-Hemp, isitshalo esihlobene nensangu, itholakala kalula futhi ine-acid ye-photochemical efanayo ekhiqiza izinhlobo eziningi zama-cannabinoids. Isitshalo se-hemp sibiliswa kancane nge-organic (esekelwe ekudleni) i-ethylalcool. Isitshalo se-hemp sinyakaziswa kahle ukuze kukhuthaze ukunyakaza kwamangqamuzana kanye nokungqubuzana kwemvelo phakathi nalokhu kuthumba okuphansi kokushisa. Lokhu kudala umhwamuko obese ucwebezeliswa bese uguqulwa ube isakhi esifiswayo, i-cannabinoid.
Ukulethwa Okuguquguqukayo Komthamo
Noma yiliphi inani le-CBG lingagcinwa esikhungweni sethu sokukhula. Sizogcwalisa noma yiliphi i-oda futhi sihambe noma yibuphi ubude ukuletha umkhiqizo wakho kuwe.
Ikhwalithi Engcono Kakhulu
Yonke imikhiqizo ikhiqizwa e-Denver Environmental Health Compliant Facilities. Sithobela yonke imithetho ebekwe ngokwezemvelo, imithetho yezempilo kanye nezokuphepha ukuze sinikeze inqubo engcono kakhulu yokukhipha i-hemp.
Ama-tincture angenziwa ngokwezifiso
Sinikeza ububanzi bemithamo ye-CBC, kusukela ku-500mg kuya ku-3000mg. Ama-tinctures ethu angenziwa ngezifiso ngombala namalebula.
I-CBG Oil Wholesale inikezela ngesengezo somuthi
I-National Institute of Health ikhombisile ukuthi i-CBG nemindeni yayo ye-cannabinoid kufakazelwe ukuthi yehlisa ingcindezi, ukukhathazeka nokudangala. Ucwaningo oluningi luye lwabonisa ukuthi insangu yezokwelapha inezinzuzo eziningi zezempilo. I-CBG ikhonjisiwe ezifundweni zokunciphisa izimpawu ze-glaucoma kanye nokuthuthukisa ukucindezela kwamehlo ( umthombo). Funda kabanzi mayelana nezinzuzo zezempilo ezingaba khona ze-CBG, okuhlanganisa namakhasi angama-50+ achazwayo futhi acashunwa ezifundweni zezokwelapha.
Ukuphathwa ngomlomo kwamafutha e-cannabinoid kubonise ukunikeza ibhalansi enkulu phakathi kokukhululeka okusheshayo nokukhululeka okuhlala isikhathi eside ekukhathazekeni nasezinhlungwini. Ngenxa yokuthi ihlanganiswe namafutha kakhukhunathi e-mct, uwoyela wethu wezinto eziphilayo uqukethe izinhlanganisela eziningi ezinhle kakhulu njenge-terpenes ne-omega-3 fatty acid, ama-amino acid, i-chlorophyll namavithamini. Yonke imikhiqizo ikhiqizwa e-Denver Environmental Health Compliance Facility. Sithobela yonke imithetho ebekwe ngokwezemvelo, izimiso zezempilo nokuphepha. Lokhu kusivumela ukuthi sinikeze inqubo yekhwalithi ephezulu kakhulu yokukhipha i-hemp futhi siqinisekise ukuthi indawo yethu igunyaziwe Ukuthobela Impilo Yezemvelo.
Ukuthunyelwa kwe-cbg wholesale emazweni e-forgein
I-Trytranquil.net ithumela inqwaba & ne-wholesale CBG, CBD & Delta 8 THC Amafutha emazweni amaningi angaphandle, okuhlanganisa iJalimane, i-Israel, i-Russian, i-Croatia, i-France, i-Greece, i-Hungary, i-Mexico, nokuningi! Xhumana nabamele ukuthengisa namuhla ngezindleko zomkhiqizo namashejuli wokuthumela.
I-CBG Oil Wholesale Warehouse
Sinesitoko ku-Warehouse yethu futhi singacubungula noma yiliphi inani likawoyela we-CBG ngenxa yokuba inkampani esunguliwe enamakhasimende aphindayo. Joyina umndeni wethu wamakhasimende futhi uthole izinzuzo zokungezelelwa kwe-CBG zokuphumula nempilo enhle.
Chofoza Lapha Uku-oda I-CBG Wholesale